Furaha Sirta - Daniel Sévigny - Afrikhepri Fondation
Furayaasha sirta - Daniel Sévigny
Lwuxuu adduunka oo dhan ku iibsaday Sirta ayaa sharraxday sharciga soo jiidashada waxayna caddeysay, markhaatiyaal badan, inay run tahay oo waxtar leedahay. Wax kasta oo ku dhex nool gudaha ayaa ka muuqda banaanka: waa halka uu ka bilaabmayo sharciga soo jiidashada. Marka heerkaaga gariirku ugu sarreeyo, waxaa lagama maarmaan ah in la maareeyo fikirkaaga si loo kordhiyo arrinta tamarta leh. Laakiin wali waa inaad ogaataa sida loo fikiro! Fudud, waxaad dhahdaa! Si kastaba ha noqotee, waxaan badiyaa qaadnaa culeyska taban ee fekerkeenna, ama aan ogaanno iyo haddii kale, iyo fikradaha sida: cabsida jirrada, cabsida shaqo la'aanta, dhibaatooyinka kaydka leh, ka welwelka shaqadaada. mustaqbalka, iwm,, fikradahaasi, haddaba, waxay na curyaaminayaan.
Daniel Sévigny wuxuu ku siinayaa furayaasha sirta halkan. Thanks to farsamada maaraynta fikirka ee isaga laftiisu horumariyo, wuxuu ina barayaa inaan xakameyno fikradaheena kuna dhaqano nolol maalmeedkeena. Ku dhowaad 20 sano, qoraagu wuxuu wax ka dhigayay habkan adduunka oo dhan tobanaan kun oo qofna way ku dabaqeen nolol maalmeedkooda.
3 cusub laga bilaabo € 20,00
1 waxaa laga isticmaalay € 46,86
Iibso € 20,00
Markii ugu dambeysay ee la cusbooneysiiyay Oktoobar 24, 2020 6:12 am